Midowga Yurub oo xeryo qaxooti oo ka sameynaya dalalka Niger iyo Chad • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Midowga Yurub oo xeryo qaxooti oo ka sameynaya dalalka Niger iyo Chad
Midowga Yurub oo xeryo qaxooti oo ka sameynaya dalalka Niger iyo Chad
Si loo yareeyo cadadka tirada qaxootiga ka imaanaya Afrika soona gaaraya Midowga Yurub ayaa Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron maalintii Isniinta uu kala hadley Mustashaarka Jarmalka Angela Markel iyo hoggaamiyaasha dalalka Niger iyo Jaad ee galbeedka Afrika.
Ujeedada shirka Isniintii ka dhacay Paris ayaa ahaa sidii loo yarayn lahaa qaxootiga, kuwaas oo ka soo talaabaya Badda dhexe, looguna qancin lahaa dalalka Afrikaan ka ah ee qaxootigu soo maro in ay oggolaadaan in xeryo halkaas looga sameeyo, Midfowga Yurub bixiyo dhaqaalaha ku baxaya.
– Waxaan go’aan ku gaarney in ay suurta gal tahay in qaxootiga lagu diiwaan geliyo gudaha Afrika, gaar ahaan dalalka Niger iyo Jaad (Chad), si loo kala soo soco cidda muteysatey in qaxootinimo loo qaadi karo iyo kuwa arrimaha dhaqaale wadaan ayuu yiri Emmanuel Macron, madaxweynaha faransiisku.
Todoba dal oo kamid ah Midowga Afrika ayaa soo dhaweeyey qorshaha Emmanuel Macron waxaana kamid ah Spain iyo Talyaaniga.
Midowga Yurub ayaa doonaya in ay qaxootiga ka soo qaataan labadaas dal waa kuwa ay u arkaan in ay buuxiyeen shuruudihii ay ku heli kari lahaayeen magangelyo.
Hoggaamiyaasha Midowega Yurub ayaa isla qaatey in kor looq aadayo deeqda la siinaayo dalalka Afrikaanka ah ee kala shaqeynaya yaraynta qaxootiga.
Sanadkasta boqolaal qof ayaa ku geeriyooda safarka ay u soo galaan in ay gaaraan dalalka Koonfurta Yurub, waxaana ay doonto kuwa neefta ah ka soo kaxaystaan dalalka Waqooyiga Afrika gaar ahaan Libya iyo Masar.